Back Pain – Healthy Life Journal
———၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊———– Q. ခါးနာခြင်းအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ A. ခါးနာတယ်ဆိုတာက ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ခါးနာတာက ထိုင်တာ၊ အိပ်တာ၊ သွားလာတာ စတဲ့ အနေအထိုင်မှားလို့ ဖြစ်တာပါ။...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ဘာကြောင့် နောက်ကျောနာရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ အလေးအပင် သယ်မတဲ့အခါ အနေအထား မမှန်တာ၊ အလေးအပင်တွေကို ကုန်းကုန်းကွကွ အနေအထားမျိုးနဲ့ ဆတ်ခနဲဆွဲမတာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ၊ အမြင့်ကနေပြုတ်ကျတဲ့အခါ၊ အချိန်အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ၊...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ သမီးရဲ့အမျိုးသား မကြာခဏ ခါးတွေအရမ်းကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ဝေဒနာ ခံစား နေရပါတယ်၊ ဆရာ အဲဒါဆေးသောက်လည်း ခဏပဲ သက်သာပြီး ဆေးထိုးရင်တော့ ပျောက်သွားသလို ခံစားရပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ရှင့်။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။...
ခြေထောက်၊ တင်ပါးနှင့် ဒူးနာကျင်မှုတို့ကို သက်သာစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း
၊ လရိပ်မေ ၊ အမေရိကန်က လူဦးရေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကြားဟာ ဒူးနာတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်။ အဲဒီလို ခံစားရတဲ့အခါ နာကျင်မှုအမြန်ဆုံးသက်သာစေဖို့ ရိုးစင်းလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁) ခြေဖနောင့်မြှင့်ခြင်း ကုလားထိုင်တစ်လုံးကိုယူပြီး ကျောမီနောက်မှာ ရပ်ပါ။...
ခါးနာတတ်သူ အနှိပ်ခံသင့်သလား . . .
မေး. ကျွန်မ ခါးနာတတ်ပါတယ်။ ခါးနာတတ်တော့ အနှိပ်ခံလိုက်ရင် ခါးနာတာကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသလား ဆရာ။ ခါးမှာဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အလေးအပင်မရင်ကော ဘယ်လိုသတိထားရမလဲ ဆရာ။ ရွှေရည် (FB) ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ခါးက ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးရွားရွား...
ခါးနာဝေဒနာကို ၁၀ မိနစ်အတွင်း သက်သာစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၇ မျိုး
၊ လရိပ်မေ ၊ လူဦးရေရဲ့ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က ဘ၀မှာ တစ်ခါမဟုတ် တစ်ခါဆိုသလို ခါးနာဝေဒနာရဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီခါးနာသူတွေရဲ့ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းက ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖူးသူတွေ ဖြစ်နေတာကလည်း အံ့အားသင့်စရာပါ။ ဒါကြောင့် ခါးနာဝေဒနာ သက်သာစေဖို့...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မနက်အိပ်ရာထချိန်မှာ ခါးနာပေမယ့် နေ့လယ်ဆိုရင်တော့ ခါးနာတဲ့ ဝေဒနာက သက်သာသွားပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. မနက်အိပ်ရာထတဲ့ အချိန်မှာ ခါးနာပြီး နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ကောင်းတာက အိပ်တာ ပုံမမှန်တာကြောင့်...